यसरी जन्म्यो हरिबहादुर - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
रातमा उज्यालो र दिनमा अँध्यारो हुँदैन । हरिबहादुर रात हो तर उसको चरित्रमा उज्यालो पनि मिसिएको छ । हाँसो र रिस एकै ठाउँमा अटाउँदैन तर हरिबहादुरको चरित्रमा हाँसो र रिस दुवै अटाउँछ ।
वैशाख २३, २०७४ हरिवंश आचार्य
किताबलाई पलङकै टाउकोमा राखेर सुते पनि उसले केही दु:ख दिँदैन । पलङबाट खस्यो भने पनि चिच्याएर रुँदैन । किताबसँग घण्टौं कुरा गरेर बस्न सकिन्छ । त्यसैले किताबलाई बेस्ट फ्रेन्ड भन्छु म ।
मेरो घरको किताब राख्ने र्‍याकमा मेरा पनि थुप्रै बेस्ट फ्रेन्ड छन् । म तिनीहरूसँग घन्टौं कुरा गरिरहन्छु । मेरो ‘चिना हराएको मान्छे’ पुस्तकले पनि धेरैको घरको बुक र्‍याकमा बस्ने मौका पाएको छ । हामीले वर्षौंअघि निर्माण गरेको ‘१५ गते’, ‘लालपुर्जा’, ‘वनपाले’, ‘चिरञ्जीवी’, ‘सुरबेसुर टेलिचलचित्रहरूको कुरा नेपालीहरूका जमघटमा सुन्न पाइरहन्छौं । प्रहसन चलचित्रहरूमा मात्र रमाइरहेका हामीलाई ‘चिना हराएको मान्छे’को प्रकाशनपछि देश–विदेश जहाँ गए पनि नेपालीहरूको मुखबाट किताबको कुरो सुन्न पाउँदा चलचित्र प्रहसनजत्तिकै यो पनि बलियो माध्यम रहेछ भन्ने थाहा भयो ।
न्युरोडको फुटपाथमा किताब फिँजाएर बेच्ने फुटपाथे साहु मलाई देख्दा कराउँदै भन्छन्, दाइ चिया खान आउनुस्, मैले तपाईंको किताब धेरै बेचेँ, अझ पनि बेच्दै छु । उनको खुसी देख्दा र सुन्दा, देश–विदेशका नेपालीहरूले अब तपाईंको अर्को किताब कहिले आउँछ भनी गरेको प्रश्न सुन्दासुन्दा मलाई ऊर्जा प्राप्त भएको हो ।
चिना हराएको मान्छे लेख्दा मैले विषय सोच्न परेन । जिन्दगीमा भोगेका घटना नै विषय थिए । अब नयाँ पुस्तक लेख्दा त विषय चाहियो ! विषय के ? उपन्यासका आधारमा धेरै चलचित्र बनेका छन् । तर, चलचित्रका आधारमा उपन्यास ? यस्तो मैले कहिल्यै देखेको छैन । उसो भए आफैं देखाइदिने कि त ? मेरो मन तरङ्गित भयो ।
‘मदनबहादुर हरिबहादुर’ टेलिचलचित्रका आधारमा उपन्यास लेखौं, यसो गरे कसो होला ? एउटा मनले भन्छ, हुँदैन । अर्को मनले भन्छ, हुन्छ । आफ्नै चलचित्रका आधारमा उपन्यास लेख्दा मलाई कारबाही त हुँदैन होला ! मदनबहादुर हरिबहादुरको लेखन म आफैंले गरेको हुनाले मैले कसैसँग स्वीकृति लिनु पनि पर्दैन । फेरि यो उपन्यास मदनबहादुर हरिबहादुर टेलिचलचित्रको हुबहु होइन । त्यस टेलिचलचित्रका १५ प्रतिशत जति दृश्य यससँग मिल्छन् ।
मदन दाइले मलाई अनुमति र सल्लाह नदिने त झनै कुरै भएन । चिना हराएको मान्छे लेख्न सधैं घचघचाइरहने रवीन्द्र समीरले अर्को किताब पनि लेख्नुपर्छ भनी दोहर्‍याइरहेपछि मैले फेरि कलम समात्ने निर्णय गरेको हुँ ।
रातमा उज्यालो र दिनमा अँध्यारो हुँदैन । हरिबहादुर रात हो तर उसको चरित्रमा उज्यालो पनि मिसिएको छ । हाँसो र रिस एकै ठाउँमा अटाउँदैन तर हरिबहादुरको चरित्रमा हाँसो र रिस दुवै अटाउँछ । उसलाई देखेर चिमटौं, कोपरौं, भुत्ल्याएर लडाइदिऊँजस्तो हुन्छ ।
तर, हाउभाउ बोलीचाली हेर्दा हाँसो उम्लिन्छ पनि ।
हरिबहादुर असफलता र मूर्खताको प्रतीक हो । ऊ आफूलाई संसारको सबैभन्दा बाठो ठान्छ तर जहाँ पाइला टेके पनि दस बल्ड्याङ खान पुग्छ । नकच्चरो, थेच्चरो, काइते, बदमास, भडुवा, स्वाँठ, कुलङ्गार, आवारा यस्ता धेरै लक्षणले युक्त भएको मान्छे बन्यो हरिबहादुर । यति धेरै दिमाग घुमाएर हिँड्ने हरिबहादुरले त्यो दिमागलाई सही तरिकाले घुमाउन सकेको भए नेपाल मात्र होइन, संसारै हाँक्न सक्ने व्यक्ति हुन्थ्यो । हरिबहादुर टुकुचा खोलाजस्तै भयो । पानी हो तर नाली मिसिएको ।
तोतेबोली बोल्ने बालक हरिबहादुरलाई देखेर रातोमाटे गाउँका मान्छेहरू भन्थे, योजस्तो चलाख बच्चा हाम्रो गाउँमा कोही पनि छैन । अधबैंसे हरिबहादुरलाई देखेर भने, योजस्तो काइते मान्छे यो गाउँमा कोही छैन ।
काइते चरित्र भएका मान्छेहरूले अरूको सम्पत्तिमा आँखा लगाएर थुपै्र सम्पत्ति जोड्न सक्छन् । तर, हरिबहादुरले केही पनि जोड्न र जोगाउन सक्दैन । हरिबहादुर काइते नभएर बुद्धि घाइते भएको चरित्र हो । उसले सम्पत्ति त के आफ्नो शरीरसमेत राम्ररी जोगाएर राख्न सक्दैन ।
लेख्दालेख्दै नेगेटिभ र पोजेटिभ चरित्र भएको कथा तयार भयो । नेगेटिभ चरित्र बोकेको पात्रको नाम राख्न ज्यादै गाह्रो लाग्छ । सकेसम्म नकारात्मक पात्रको नाम अरूसँग नजुधोस्जस्तो लाग्छ । मैले आफ्नै नामको आधी नाम सापट लिएर पात्र/उपन्यासको नाम हरिबहादुर बनाएँ । सकारात्मक पात्रको नाम मदनबहादुर राखेँ । नेगेटिभ र पोजेटिभ भएपछि बत्ती बल्छ । सायद बल्यो कि ?
नेपाल, भारत, बर्मा संसारभरि गरी लाखौं हरिबहादुर होलान् । तर, संसारको कुनै पनि हरिबहादुरको चरित्रसँग यो हरिबहादुरको चरित्र मिल्दैन । यदि मिलेछ भने मेरै चरित्रसँग मिल्ला । कसैसँग मिल्यो भने संयोग मात्रै हो भन्ने चलन छ ।
कतिपय कलाकार अभिनय मात्र गर्छन् । तर, लेखनदेखि अरू थुप्रै काम हामी आफैंले गर्‍यौँ । जति पनि बोलियो, ती सब लेखेरै बोलिएका हुन् । लेख्दैमा लेखक हुन्छ त ? लेख्न त वकिल, पत्रकार, व्यापारी सबैले लेख्नुहुन्छ तर उहाँहरूको लेखनमा तथ्य हुन्छ र हुनुपर्छ । तर हाम्रो लेखन त हावा हो । यस्तो हावा जो सिर्जनात्मक परिधि र अनुशासनभित्रको कल्पना । टेलिभिजन र रंगमञ्चमा गरी करिब एक हजार घण्टाका हाम्रा सामग्री छन् । यी सबैको सुरुआत कलमबाटै भएको हो ।
पुस्तक छापेपछि मात्र लेखक भइने रहेछ, नत्र ती हाम्रा उपन्यासजस्तो आयाम र तरिकाका स्क्रिप्टलाई उपन्यासका रूपमा छापेका भए उपन्यासकार भइसकिने रहेछ । तर, मैले उपन्यासकार हुने रहरले मात्र यो उपन्यास लेखेको भने होइन । किन हो त ?
स्क्रिप्टमा कति कुरा लेख्न मिल्दैन । कल्पनामा आएका कति कुरा मार्नुपर्छ । यसरी मार्नुपरेका दु:खद क्षण धेरै छन् । तर, मलाई उपन्यास लेख्दा यो दृश्य देखाउन गाह्रो होला कि, महँगो होला कि, धेरै समय लाग्ला कि, कलाकार नपाइएला कि यस्ता झन्झट केही भएन । स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न पाइने भएकाले मैले उपन्यास लेखेको हुँ । साझा प्रकाशनले छापेको हाम्रो महसनजस्तै किन स्क्रिप्ट/नाटकका रूपमा नछापेको भन्ने प्रश्न यहाँको मनमा होला, मेरो उत्तर यही हो— स्क्रिप्ट अलि सीमित, कृत्रिम, नियन्त्रित र अपठनीय हुन्छ तर उपन्यास भने अनन्त, स्वाभाविक, अनियन्त्रित यसैले ।
विख्यात लेखक विलियम शेक्सपियर बितेर गएको चार सय वर्ष भयो तर उनका रचना संसारभर अनेक तरिकाले मञ्चन भइरहेका छन् अहिले पनि । हाम्रा कति रचना पुस्तकका रूपमा आए भने पछि मञ्चन गर्न चाहनेले आफ्नो तरिकाले मञ्चन गर्न पनि सक्नुहोला कि भनेर अब हामी हाम्रा चर्चित र सर्वकालिकजस्ता प्रहसनलाई पुस्तकका रूपमा छाप्ने पनि सोचिरहेका छौं । र, यसरी छाप्दा संवाद र कोष्ठमा निर्देशन मात्र नराखी स्वतन्त्र तरिकाले उतार्ने चाह छ । किन त ? अबको/पछिको पुस्ता प्रविधिका कारण कल्पना नमारी हुबहु छायांकन गर्न सक्छ । शेक्सपियरझैं हामी चार सय वर्ष त नबाँचौँला तर चालीस त कटौँला कि ?
उपन्यास आजदेखि तपाईंका हातमा आउँदै छ, मलाई कताकता डर पनि लागेको छ । एसएसली जाँच दिएजस्तो भइरहेको छ । एसएलसी फेल भएको त परिवारले मात्र थाहा पाउँथ्यो, यसमा फेल भए त सारा लोकले थाहा पाउँछ । तर, डिस्टिंसन र डिभिजनभन्दा पनि सिर्फ पास भए हुन्छ । ३२ दिए कसो होला ?
(उपन्यास ‘हरिबहादुर’ को विमोचन आजै शनिबार हुँदै छ ।)
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७४ ०९:५०